Indonezia · Janoary, 2014 · Global Voices teny Malagasy
Indonezia · Janoary, 2014
Novambra 2015 3 Lahatsoratra
Avrily 2011 4 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Indonezia tamin'ny Janoary, 2014
Ranon-trambo Sy Tany Nihotsaka Namely Tao Sulawesi Avaratra, Indonezia
Mediam-bahoaka31 Janoary 2014
Namely ny tanànan'i Manado tao Indonezia ny ranon-trambo sy ny fihotsaky ny tany mahery vaika ary nampifindra mponina maherin'ny 40.000. Voalaza fa nandrakotrafiara am-polony sy mpandeha tao anatiny ny fihotsaky ny tany.
Indoneziana Mpiasa An-trano Milaza Ho Voadaroka, Nomena Sakafo Ambany Foitra, Nodorana Tao Hong Kong
Hong Kong (Shina)21 Janoary 2014
Tranga iray mampivalaketraka miresaka fanararaotana natao taminà mpiasa an-trano iray no niseho masoandro tao Hong Kong tsy ela akory izay. Miasa miaraka mba hamongotra io rafitra fanandevozan'ny andro maoderina io ireo vondronà mpikatroka mafàna fo
SARIPIKA: Olona 20 000 Nafindra Toerana Noho Ny Fipoahan'ny Volokano Tao An-Tendrombohitra Sinabung Indonezia
Mediam-bahoaka14 Janoary 2014
Rehefa tsy nihetsika nandritra ny 400 taona, dia nipoaka tampoka ny volokano tao amin'ny tendrombohitra Sinabung tao Indonezia ka nampifindra toerana mponina maherin'ny 20,000. Efa nipoaka in-200 ny volokano tamin'ny taon-dasa
Zavona sy Haiyan: Ireo Loza Nahafaty Tao Azia Atsimo Atsinanana Tamin'ny 2013
Filipina08 Janoary 2014
Ny fandrakofan'ny Global Voices ny halotoan'ny zavona nihoatra ny sisintany tany Singapore, Malezia, ary Indonezia; sy ny fiantraikan'ilay rivodoza mahery vaika Haiyan mahafaty tany Filipina tamin'ny 2013.